Nhanho nhanho hunyanzvi hwekuita pamba - Ikkaro
kudzidziswa >> Crafts
Kuita zvinhu nemaoko edu mufaro chaiwo. Gadzira chimwe chinhu kubva pasina. Kugona kudzokorora zvishandiso zvatinotenda kuti hazvina maturo uye toona kuti tinovapa hupenyu hwechipiri.
Gadzira hunyanzvi uye uvaite vakanaka. Izvo zvinoshamisa.
Mhizha, DIY, sei, kupindirana pasina kuve nekuparadzaniswa kwakajeka. Chinenge chero chinhu pane blog isu chatingati hunyanzvi, asi muchikamu chino tinosanganisira zvinyorwa zvatinoita chimwe chinhu
Nzira yekugadzira Halloween manhanga
Nezuro manheru ndakaita nekukasira yangu yekutanga Halloween manhanga. Izvo hazvina kuomarara zvachose kunyangwe ndaifanira kuzviita husiku uye handina mwenje unodiwa kutora mifananidzo yakanaka. Nhanga iyo yauri kuzoona inogara yakangofanana kunyangwe dzimwe nguva ichitaridzika kupenya orenji uye dzimwe nguva ine toni yakasvibira.
Gore rino ndakatenga manhanga, sezvavanoisa pakanyorwa Variety: Halloween, hazvo, haitipe ruzivo rwakawanda, kazhinji kubva pane zvandakaverenga (kuona kana mumwe munhu achigona kuzvisimbisa) ivo vanoshandisa (Cucurbita Pepo, Yakasanganiswa cucurbita, Maximum cucurbita, Cucurbita moschata) ndezvipi Mapopu eAmerica, iyo yavanoshandisa Jack o mwenje, ndiwo manhanga eHalloween.
Nzira yekugadzira mhete nemapenzura ane mavara
Ichi ndicho chimwe chevashoma shasha izvo unombozviona uri pawebhu uye kuti vanoita zuva rako.
Ehe, isu tichazodzidza maitiro ekugadzira a mhete yekugadzira yemakrayoni emapuranga, uye kuti inotaridzika kudaro, inotonhorera seizvi
Iwe wainyatsoda. Zvakanaka, tarisa maitirwo azvo, zviri nyore kwazvo. Kunyangwe mumifananidzo yetutorial ivo vanoshandisa lathe isu tinogona kuzviita mune imwe nzira yekuzvigadzirira kunyangwe isu tichaisa mari yakawanda nenguva nechimwe chinhu chakasiyana-siyana chishandiso, kunyangwe nemathurusi emawoko.
Maitiro ekugadzira butiro neEVA rabha yekuchaja nharembozha yako
Nguva zhinji apo tinochaja nhare Hatizive kwekuisiya uye tinopedzisira tave kuizorora pasi, kana pamusoro perediyeta, patafura iri kure uko tambo inosara yakarembera nenjodzi yekuti chero munhu anopfuura achazvikanda kwatiri.
Ndiri kuzoita yakapusa kwazvo kesi yekubata iyo smartphone kune chaja pachayo uye kanganwa nezve aya matambudziko.
Izvo zvinogona zvakare kuitwa nemabhodhoro emabhodhoro asina chinhu, kugadzira dengu diki, asi mhedzisiro yacho yakaipa kwazvo.
Dzokorora matani e tuna
Inonakidza uye yakapusa hunyanzvi hwekuita nevana. Icho chiri pamusoro dzokororazve kana kushandisa zvekare magaba etuna kutora makenduru kana hari dzemaruva. Tichawana mibairo mikuru mumasekondi mashoma.
Saka ngatitangei kubhizinesi.
Tichada mamwe makani akashandiswa uye hombodo mbichana dzemapuranga. Neya yemapuranga inoyevedza kwazvo, asi iine mavara epurasitiki tweezers tichawanawo mhedzisiro yakanaka ;-)
Maitiro ekugadzira makadhi eKisimusi akagadzirwa
Kisimusi iri kuuya !!! Inguva yekutanga kugadzirira mapurojekiti atinoda kushandisa mumavhiki mashoma. Uye… Ramba uchiverenga
Nzira yekuita sei akanzwa Mr. Potato
Ngatiedzei hunyanzvi hwakareruka huchave hunodiwa hwevadiki vari mumba. Ndinoziva … Ramba uchiverenga
Penda pamakadhibhodhi mazai makapu
Kubva Tsvina tiratidzei basa re Enno weKroon
Akatopa zita iri zita Eggcubism
Kusvika parizvino takange tashandisazve artón mazai emikombe, kumakamuri asinganzwikwe kana zvigadzirwa zvemimhanzi uye kutamba mitambo. Mancala
Nzira yekugadzira mudhudhudhu nemagetsi maviri
@irreductible inoita kuti ndizive kuburikidza ne twitter nezve iyi dzidziso. Ichokwadi ndechekuti ini ndinofunga zvakakodzera kuti ubereke zvakare uye kuti inoramba iri ... Ramba uchiverenga
Maitiro ekugadzira magineti mabheji
Unoda mabhodhoro emabhodhoro edoro?
Zvakanaka ngatiitei ivo rinobva. Kuti? Nekuti uzviise mufiriji uye ugone kuzviratidza, for gadzira yemagineti mutambo semuenzaniso checkers uye zvirokwazvo unogona kufunga nezve kumwe kushandiswa.
Maitiro ekugadzira whiteboard
Imi mese munoziva chii a Bhodhi chena.
Aya mabhodhi ane mucherechedzo wakasarudzika iwe unogona kunyora uye kudzima kakawanda sezvaunoda.